साबुन नलगाई हात धुँदा किन जाँदैन भाइरस ? - WASHKhabar
साबुन नलगाई हात धुँदा किन जाँदैन भाइरस ?
१२ चैत्र २०७६, बुधबार १२:३३ 1090 पटक हेरिएको
काठमाडौ : ‘साबुन पानीले मिचीमिची हात धुनुहोस्’ यो कुरा सुन्दा कहिलेकाहीं मनभित्र उब्जिन सक्छ ‘साबुन नलगाई हात धुन मिल्दैन ?’ हात धुन त मिल्छ । तर कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्नका लागि तपाईंले साबुन नलगाई हात धोएर मात्र पुग्दैन । तपाईंले साबुन पानीले मिचीमिची हात धोइदिँदा कोरोनाभाइरस मात्र नभई अन्य खराब ब्याक्टेरिया र खतरनाक भाइरसहरू पनि मर्छन् ।
अमेरिकाको पिट्सबर्र्ग बाल अस्पतालका संक्रामक बालरोग विभागका प्रमुख भाइरोलोजिस्ट डा. जोन विलियम्स भन्नुहुन्छ ‘चारथरी कोरोना भाइरसहरू मानिसमा प्रत्येक वर्ष नियमित रूपमा सर्छन्, ती भाइरसले मुख्यतया रुघा लगाउँछन् । वास्तवमा तिनले एक तिहाइ सामान्य रुघा गराउँछन् । तिनले मानिसको ज्यान भने लिँदैनन् ।’
साबुन पानीले राम्ररी हात धुँदा कोरोना भाइरस परजीवी मात्र मर्ने हैनन् । प्रत्येक वर्ष लाखौं मानिसलाई मार्ने इन्फ्लुएन्जा र मेटान्युमो भाइरस पनि साबुनपानीले राम्ररी हात धुँदा मर्छन् । साबुन र तातोपानी अनि अल्कोहल भएका स्यानिटाइजरहरू जस्ता सामान्य कुरा परजीवीहरू माथि कसरी हावी हुन सक्छन् ? यसको उत्तर परजीवीको छाला र तपाईंले गर्ने सफाइमा निर्भर रहन्छ ।
माइक्रोस्कोपबाट हेर्दा कोरोनाभाइरसहरू चुच्चा ठेसोले भरिएका देखिन्छन् जसले गर्दा तिनीहरू मुकुट जस्तो देखिन्छन् । अंग्रेजीमा कोरोना भनेको मुकुट हो । त्यो मुकुटमुनि कोरोनाको बाहिरी पत्र हुन्छ जुन लिपिडले बनेको हुन्छ । सरल भाषामा भन्दा लिपिड भनेको बोसो हो ।
अब अनुमान गर्नुस्, कोरोनाभाइरस घिउ हालेको खानेकुरा हो । ‘तपाईं घिउ हालेको खानेकुरा राखेको भाँडोलाई पानीले मात्र धुन खोज्नुहुन्छ भने त्यो घिउ भाँडोबाट निस्कँदैन,’ विलियम्सले व्याख्या गरेर भन्नुभएको छ ‘चिल्लो हटाउनका लागि तपाईंले अलिकति भए पनि साबुन प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले साबुन वा अल्कोहल भाइरसको बोसोयुक्त पत्रलाई नष्ट गर्न एकदमै प्रभावकारी छ ।’
‘त्यसले भाइरसलाई भौतिक रूपमा निष्क्रिय तुल्याउँछ र भाइरस मानव कोषिकामा प्रवेश गर्न सक्दैन,’ विलियम्सले भन्नुभयो ।
पानी र साबुनले हात रगड्दा साबुनका फोका निस्कन्छन् जसले ब्याक्टेरिया, भाइरस वा अन्य जीवाणुलाई सतहमा टाँसिने गरी रासायनिक बोन्ड बनाउन दिँदैन । त्यसैले तपाईं साबुनपानीले हात घोट्दै अझै बढी फिँज निकाल्नुस् र हात तथा औंला अनि नङका कुनाकाप्चामा पु¥याउनुस् । बीस सेकेन्डसम्म हात घोटिरहनुभयो भने बल्ल सफा हुन्छ । तपाईंले हात धुँदा सबै कीटाणुहरूलाई साबुनका कणिकाहरूले धोएर फालिदिन्छन् ।
‘साबुनको फिँजले कीटाणुहरूलाई टपक्क टिपेर नालीमा बगाइदिन्छन्’ न्याशभिलस्थित भ्यान्डरबिल्ट युनिभर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिनमा संक्रामक रोगका प्राध्यापक डा.विलियम शाफ्नरले भन्नुभयो । अनि तातो पानी नै किन ? आखिर तातो पानीले ब्याक्टेरिया वा भाइरसलाई आफैं मार्न सक्दैन । कि त हातै खुइलिने तातो पानी प्रयोग गर्नुप¥यो । ‘चिसो पानीले पनि काम गर्छ तर तपाईंले साबुन निकै धेरै समयसम्म घोटिरहनुपर्छ,’ रसायनशास्त्री बिल वुएस्टले बताउनुभयो । उनी एमोरी विश्वविद्यालयमा संक्रमणनिरोधी तत्त्वको अध्यापन गर्नुहुन्छ ।
‘तातो पानीले साबुन राम्ररी लाग्छ र थप फिँज निस्कन्छ,’ वुएस्टले भन्नुभयो । ‘साबुनले फोहोर र त्यसमा रहेका ब्याक्टेरिया तथा भाइरसलाई लखेट्दैछ भन्ने संकेत दिन्छ ।’
अल्कोहल भएका स्यानिटाइजरहरूले राम्ररी प्रयोग गर्ने हो भने साबुन जत्तिकै प्रभावकारी हुने शाफ्नरले भन्नुभयो । ‘स्यानिटाइजरमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अल्कोहल हुनुपर्छ,’ शाफ्नरको भनाइ छ । अल्कोहलले नै भाइरस मार्ने हो ।’ अलिकति स्यानिटाइजर हत्केलामा हालेर हतारहतार पुछ्दा काम गर्दैन, शाफ्नर भन्नुहुन्छ
‘तपाईंले टन्न स्यानिटाइजर लिएर हातको कुनाकाप्चा, औंलाको बीचबीचमा अनि पछाडिको भागमा समेत दल्नुपर्ने हुन्छ ।’ ‘अल्कोहल भिन्नै रासायनिक तत्त्व हो’ वुएस्ट भन्नुहुन्छ ‘यसले कीटाणुका मेम्ब्रेनहरूलाई टुक्य्राउँछ तर अल्कोहल ब्याक्टेरिया वा भाइरसको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने कुराको सुनिश्चितता तपाईंले गर्नु जरूरी छ ।’
तर स्यानिटाइजर भन्दा पनि साबुन र पानी नै बढी प्रभावकारी हुने परिस्थिति बढी छन् । विलियम्सले भन्नुभयो । साबुनपानीले सूक्ष्म जीवाणुलाई अँठ्याएर बगाउने क्षमता राख्ने भएकाले त्यो प्रभावकारी भएको हो ।
‘अल्कोहल पनि कीटाणु मार्न प्रभावकारी छ तर यसले कीटाणुलाई सफा गर्दैन, उहाँले भन्नुभयो । ‘त्यसैले मानौं कसैले हातमा हाच्छ्युँ गर्‍यो रे । उसको हातमा मकस भरिन्छ । अनि त्यसमा भएका ब्याक्टेरिया वा भाइरसलाई निष्क्रिय तुल्याउन निकै धेरै अल्कोहल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ ‘त्यसैले कसैको हात एकदमै संक्रमित भएको छ भने साबुनपानीले हात धोएको राम्रो हो ।’ तपाईं लगातार हात धुँदा निकाल्ने साबुनका फिँजमा गर्व गर्नुस् अनि सूक्ष्म जीवाणुहरू मरेर नालीमा बगेको कल्पना गर्दै आनन्दित हुनुस् ।
सीएनएनमा प्रकाशित स्यान्डी लामोत्तेको रिपोर्ट ।